Live Chat With Scholars (2017 October)
21/10/2017 Offline Event
Live Chat with Scholars (ပညာတော်သင်များနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း) ဆိုတဲ့ပွဲကလေးက ဘာလဲ။
ဒီပွဲကလေးဟာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေနဲ့ Professionals တွေ တွေ့ဆုံခွင့်ရအောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ ပွဲလေး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကို ပညာတော်သင်ဆု နဲ့ ကျောင်းသွားတတ်ဖို့ ရည်မှန်းချက် ရှိတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပညာတော်ဆုကို ရအောင်ကြိုးစားမလဲဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးသွားပေးမှာပါ။
Venue: Pansuriya Restaurant [No.102, Bogalayzay street (Between Mahabandoola street and Merchant street), Botahtaung township, Yangon, Myanmar]
ဒီပွဲကို ဘာလို့ လာသင့်တာလဲ။
ဒီပွဲမှာ မတူညီတဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးကနေ ဘာသာရပ် အသီးသီး၊ အတန်းပညာအဆင့်အသီးသီး(ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲလွန်) အတွက် ပညာသင်ဆု ရပြီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သူတွေရှိနေမှာပါ။ ဒီပွဲမှာ လာရောက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ကို ပညာသင်ဆု ရဖို့အတွက် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်မလဲဆိုတာတွေကို သိရှိစေနိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အောင်မြင်သူတွေဆီကနေ အကြံဥာဏ်တွေ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Event မှာရှိတဲ့ Registeration Form ကနေ တဆင့် စာရင်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီး စာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီပွဲကလေးကို ဘယ်အဖွဲ့အစည်းက ဦးဆောင်ပြီး ပြုလုပ်တာလဲ။
“Live Chat with Scholars” ဆိုတဲ့ ပွဲကို တော့ မြန်မာလူငယ်တွေကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်၊ လုပ်ငန်းခွင် အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကြံဥာဏ်၊ နည်းလမ်းတွေပေးနေတဲ့ Wynee Myanmar (၀ိုင်း) အဖွဲ့အစည်းက ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုကလေးဈေးလမ်းမှာရှိတဲ့ ပန်သူရိယ (Pansuriya) ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကလေးကတော့ ပွဲပြုလုပ်မယ့် နေရာကို စီစဉ်ပေးပြီး လူငယ်တွေကို အခွင့်အလမ်းတွေ တဆင့်ပြန်မျှဝေပေးနေတဲ့ (MYEO) ရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့ ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
Kaung Set Zaw, ASEAN Scholar
ကိုကောင်းဆက်ဇော်ဟာ 2004 ကနေ 2007 ခုနစ်အတွင်းမှာ ASEAN ပညာတော်သင်ဆုကို သူ အထက်တန်းတက်ခဲ့တဲ့ Singapore မှာပဲ ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးပါ။ အဲ့နောက်မှာတော့ Civil Engineering ဘွဲ့ကို Nanyang Technology University ကနေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ 2012 ခုနစ်၊ သူဘွဲ့ရပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိသားစု လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ Golden Express Tours ကို ဦးစီးလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကိုကောင်းဆက်လွှဲပြောင်းယူပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီဟာ ၀န်ဆောင်မှုတွေ အများကြီး ထပ်တိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုကောင်းဆက်ဟာ bus tickets တွေကို booking လုပ်နိုင်တဲ့ scapetour.com နဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ နေ့ချင်းပြန်ခရီး စီစဉ်ပေးတဲ့ goldenrockmyanmar.com တို့ကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Co-founder တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(2014) ခုနစ်မှာတော့ ကိုကောင်းဆက်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုကို ထပ်မံစတင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Golden Eagle Ballooning လို့ခေါ်တဲ့ ပုဂံမြို့ရဲ့ အလှတရားတွေကို ကောင်းကင်ကနေ ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်မယ့် Hot Air Balloon တွေကို စီစဉ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကောင်းဆက်ဟာ hot air balloon pilot license course ကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော Hot Air Balloon Pilot ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ မှာတော့ ကိုကောင်းဆက်ဟာ လုပ်ငန်းသစ် တစ်ခုအနေနဲ့ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းတွေကို ဦးတည်လုပ်ကိုင်မယ့် Hot Air Balloon Company ကို ဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Kyi Pyar Chit Zaw, Fulbright Scholar
မကြည်ဖြာချစ်စော ဟာ The World Bank group Myanmar မှာ (Consultant - အကြံပေး) တစ်ဦးအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးပါ။ သူမဟာ ပြည်တွင်း အုပ်ချုပ်ရေး၊ Public Admistration ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ Myanmar Development Resource Institute/Center for Economic Social Development (MDRI-CESD) နှင့် The Asia Foundation တို့တွင် ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ပယ်ဖျက်ရေး စသော ကိစ္စရပ်များတွင် အစီရင်ခံစာများ ကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
(2008) ခုနစ်မှာ တည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးများလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို အဓိက လုပ်ဆောင်နေသော Action for Public အဖွဲ့အစည်းမှာ Co-Founder တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်ထိ Board Member တစ်ဦးအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြည်ဖြာ ဟာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ချီးမြင့်တဲ့ Trust Women Scholar ကို 2015 ခုနစ်မှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ Fulbright ပညာတော်သင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်ကပဲ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University ကနေ Excutive Master of Public Administration Program ဘွဲ့ကို ရခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Naw Blessing, Hong Kong University Foundation Scholar
Naw Blessing ဟာ မကြာသေးခင်ကပဲ University of Hong Kong [HKU] ကနေ Business Administration ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ကာလ ၄ နှစ်စလုံးအတွက် Outstanding International Students ဆိုတဲ့ Scholarship ကို HKU Foundation ကနေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ Business Design & Innovation (BDI) နဲ့ Finance အပိုင်းကို အဓိက ဘာသာအနေနဲ့ လေ့လာခဲ့သူတစ်ဦးပါ။ တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလည်း HKU မှာ Student Ambassador အနေနဲ့ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် စိတ်ဝင်စား၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ပွဲတွေ အများကြီးကိုလည်း တာဝန်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် တတိယနှစ်မှာတော့ Blessing ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Charlotte မြို့မှာရှိတဲ့ University of North Carolina ကို Semester Exchange တစ်ခုနဲ့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ စာသင်နှစ် နောက်ဆုံး Course အတွက်ကိုတော့ ဖိလစ်ပိုင်၊ Bohol မှာ သွားရောက်လေ့လာရပြီး အနီးအနားက မြို့တစ်မြို့မှာ ရှိတဲ့ အသေးစားလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုမှာလည်း အကြံပေးအနေနဲ့ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ စီမံခန့်ခွဲမှုရေးရာအကြံပေးလုပ်ငန်းတွေမှာ Consulting Analyst အနေနဲ့ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Naw Blessing က ကျောင်းစာသင်ခန်းစာတွေ၊ အလုပ်တွေပြီးပြီး အားတဲ့အချိန်မှာတော့ ဟင်းချက်တာ၊ ခရီးထွက်တာနဲ့ လုပ်အားပေးအလုပ်တွေ လုပ်တာကို ၀ါသနာပါသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်...။
What is Live Chat with Scholars?
Live Chat With Scholars is the first networking event in Myanmar for mid-career professionals and university students, where they can learn from established scholarship winners about ways to study abroad onascholarship.
Why should I go for the event?
At the event, there will be scholars who were funded to study abroad by different bodies at different stages in their education – high school, undergraduate and postgraduate studies – to different countries. Hence, the event will allow you to reflect on the kind of scholarship you need to look for to match your personal skills, dreams and career needs.
How should I register for the event?
Please fill up "Event Reservation Form".
Which organisation(s) enables the event?
Live Chat With Scholars is the second event series launched by WyneeMyanmar.com,agroup of professionals volunteering their time to give Myanmar youth interactive career guidance by buildingacommunity. The event is hosted at Pansuriya Restaurant, located on Bogalayzay Street with the support of (MYEO).
The invited scholars are:
Mr Kaung Set Zaw was an ASEAN scholar from 2004 to 2007 in Singapore where he attended Secondary school and Junior college. He then graduated from Nanyang Technological University with bachelor of Civil Engineering.
In 2012 after his graduation, he came back to Myanmar to take over his family business - Golden Express Tours (www.goldenexpresstours.com). After he took over the company, he brought the company to another level and expand the product ranges. He also co founded scapetour.com which is the booking platform for bus tickets and goldenrockmyanmar.com which is the day return trip to golden rock with the most reasonable price in the industry.
In 2014, he startedanew business -ahot air balloon company called Golden Eagle Ballooning which makes hot air balloon flights over Bagan (www.goldeneagleballooning.com). He also took the hot air balloon pilot license course and he is the first Myanmar hot air balloon pilot. His current work is to set up of new hot air balloon company which will focus on the advertising and branding.
Ms. Kyi Pyar Chit Saw isaconsultant with The World Bank group Myanmar. She has published reports on local governance, public administration reform, and decentralization with the Myanmar Development Resource Institute/Center for Economic Social Development (MDRI-CESD) and The Asia Foundation. She also serves asaBoard Member the Action for Public,asocial business focusing on women empowerment and economic development, which she co-founded in 2008. Saw wasa2015 Trust Women scholar, awarded to outstanding leaders around the world working on women issues. She is alsoaFulbright Scholar and recently graduated from the Executive Master of Public Administration program at the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University.
"Naw Blessing recently graduated from The University of Hong Kong (HKU) withaBachelor in Business Administration. She received HKU Foundation Scholarship for Outstanding International Students throughout her four years of undergraduate studies. She majored in Business Design & Innovation (BDI) and Finance. During her undergraduate years, she served asaStudent Ambassador in promoting HKU and helping organise fun events for fellow students.During her third year, she went onasemester exchange at The University of North Carolina at Charlotte in USA. Her last undergraduate course took place in Bohol, Philippines where she stayed inalocal village and consultasmall business in the town nearby. She will be joiningamanagerial consulting firm asaconsulting analyst soon. When away from her study desk, she enjoys, cooking, travelling and volunteering."